याद राख्नुस्, दाँतलाई स्वस्थ र मजबुत बनाइराख्ने यी ६ तरिका
हामी सबैले नियमित रूपमा आफ्नो दाँतलाई सफा गरिरहेका हुन्छौं ।
बजारमा पाइने विभिन्न किसिमका टुथपेस्टहरू प्रयोग गरी नियमित दाँत सफा गरिरहेका पनि हुन्छौं । तर के यतिले मात्रै हाम्रो दाँत स्वस्थ हुन्छ त ? दाँत नियमित सफा गर्नाले मात्रै दाँत मजबूत हुन्छ त ?
यहाँ हामीले दाँतलाई स्वस्थ र मजबूत बनाउनका लागि आवश्यक केही विधिहरू चर्चा गर्दैछौं ।
यी हुन् दाँतलाई स्वस्थ र मजबूत राख्ने ६ तरिका
१. चिनिजन्य वस्तुको कम सेवन
दाँतलाई स्वस्थ राख्नका लागि चिनिजन्य वस्तुको कम सेवन गर्नुपर्छ । खानेकुरा तथा पेय पदार्थमा पाइने गुलियोबाट हाम्रो मुखमा भएको व्याक्टेरियाले एसिड निकाल्छ । जसले गर्दा हाम्रो दाँतको इनामेल कम हुन जान्छ ।
बजारमा पाइने पेय पदार्थहरूमा त अझै भिन्न प्रकारको एसिडहरू हुन्छन् । जसले दाँतमा भएको इनामेललाई नस्ट गर्ने वा कम गर्न भूमिका खेल्दछन् । त्यसकारण यस्ता चीजहरूको सेवनबाट सकभर टाढै बस्नुपर्छ ।
यदी तिर्खा लाग्दा वा सामान्य अवस्थामा सादा सफा पानी पिउने बानी बसाल्नु लाभदायक हुन्छ ।
२. इनामेल बचाउने खानाको प्रयोग
क्याल्सियम पाइने खानेकुराले मुखभित्रको एसिडलाई कम गर्न मदत गर्छ । जसले दाँतलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ ।
दुध, चीज तथा अन्य डेरीजन्य उत्पादनहरूको सेवनले दातमा हुने इनामेलको रक्षा गर्नुका साथै बलियो बनाउँछ ।
दुग्धजन्य पदार्थको सेवन गर्ने बानी छैन भने क्याल्सियम युक्त खानेकुराको सेवन गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिने गरेका छन् ।
३. धेरै ब्रस गर्ने बानी तुरुन्त त्याग्नुहोस्
तपाईंलाई धेरै छिटो र कडा तरिकाले ब्रस गर्ने बानी छ भने त्यसलाई तुरुन्तै त्याग्नुहोस् । कडा तरिकाले ब्रस गर्दा ताँत कमजोर हुन जान्छ ।
मिठाई तथा अन्य खानेकुरा खाएको करिब एक घन्टासँग ब्रस नगर्नुहोस् । यो समयमा खानेकुरामा भएको अम्लिय पदार्थले दाँतको इनामेल क्षयीकरण गरेको हुन्छ । त्यसकारण यस्तो समयमा तत्कालै दाँत ब्रस गर्दा दाँत कमजोर हुन सक्छ ।
४. फ्लोराइड भएको मन्जनको प्रयोग
फ्लोराइडले दाँतलाई मजबूत बनाउनुका साथै दाँत क्षयीकरण हुनबाट बचाउँछ । यसको प्रयोगले दाँतको एसिड प्रतिरोधी क्षमतामा समेत वृद्धि हुन्छ ।
त्यसकारण फ्लोराइडयुक्त टुथपेस्टको प्रयोग गरी दाँत माझ्नु उपर्युक्त हुन्छ । यसले दाँतको इनामेललाई समेत बलियो बनाइराख्छ ।
५.दाह्रा किट्ने बानी हटाउनुहोस्
कसैकसैलाई राती दाह्रा किट्ने बानी हुन्छ । यसले दाँतलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसकारण दाह्रा किट्ने बानी विस्तारै हटाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।
यस्तो बानी भएमा चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
६. नियमित परीक्षण गर्नुहोस्
दाँतको सुरक्षाका लागि हरेक ६/६ महिनामा परीक्षण गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिने गरेका छन् ।
मकै खानुका फाइदा यस्ता छन् - क्यान्सरको खतरा समेत क...
यसरी ठीक पार्नुहोस् दाँतको दुखाइ : ल्वाङको तेलदेखि...
मोटोपनको चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यस्तो चलचित्र हेर्नुस्,...